राजनीति गरेको भनेर हेप्ने ! हामी कसरी अयोग्य ?
राजनीति गरेको भनेर हेप्ने ! हामी कसरी अयोग्य ? नियामक निकायको नेतृत्वमा जान दलको सदस्यता !
भागवत भट्टराई काठमाडौं, २ चैत
बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा ३ ले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन अयोग्य हुने व्यवसस्था गरेको छ, जसअनुसार कुनै राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न अयोग्य ठहिरनेछ ।
संवैधानिक निकाय मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायतका अन्य नियामक निकायमा पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य बन्न नपाउने प्रवधान राखिएको छ । यदि अध्यक्ष वा सदस्य बन्ने हो भने राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य बन्नका लागि राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति अब भने अयोग्य ठहरिनेछैन । विधेयकमा दफाबार छलफको क्रममा रहेको विधयेकमा सांसदहरूले यस्तो शब्द राखिएकामा आपत्तिसहित यो शब्दको कटौती गरेर योग्य बनाउने निर्णय लिएका छन् ।
तिवेदन निर्माणको चरणमा रहेको यो विधेयक अर्थ समितिले दफाबार छलफल टुंग्याएपछि प्रतिवेदन बनेर पुन: प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।
सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुनको रूपमा लागू हुनेछ । विधेयकको दफा ८ को उपदफा ३, ‘ग’ले गरेको यस्तो व्यवस्था प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ ।
राजनीति गर्नेलाई अयोग्य
‘राजनीति गर्नेहरू अयोग्य छन् भन्ने प्रमाण कसरी पेस गर्न सक्नुहुन्छ ?’, दफाबार छलफलमा भाग लिन आएका अर्थ मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिलाई सांसदहरूले र्‍याख्र्‍याख्ती पारे, अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू अलमलमा परे ।
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि राजनीति गरेको भन्दैमा अयोग्यमा राख्न नमिल्ने अडान राखिन् । समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राजनीति दलको सदस्य भएको व्यक्तिलाई अयोग्यको सूचीमा राखेकामा गुनासो गरे ।
‘अध्यक्ष वा सदस्य बन्नका लागि सिफारिस दलको चाहिने अनि त्यही दलको सदस्यलाई अयोग्यमा राखिने ?’, समिति सदस्य झाँक्रीले भनिन् । झाँक्रीकै कुरालाई बल पुग्ने गरी अर्का एक सांसदले भने, ‘राजनीति गर्नेहरू अयोग्य छन् भन्ने प्रमाण पेस गर्न सक्नुहुन्छ ?’
एक पछि अर्को सांसदले आक्रोश व्यक्त गरेपछि अर्थमन्त्रीले उपिस्थति जनाएर गइसकेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अन्य अधिकारीले यसको मर्म बुझाउन सकेनन् । ‘यो प्रचलन हो, व्यावहारिक विषय र लेखिने विषय फरक हो, पहिले दलको मान्छे भए पनि त्यहाँ जाँदा दलको हुन पाइँदैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सांसद हरिराज अधिकारीले भने, ‘चीनमा दलको सदस्य भएको कारणले अयोग्य हुन्छ त ?'
त्यसो त चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव नभई यस्तो पद पाइँदैन भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बचाउ गरे । सांसदहरूसँग जुहारी खेल्ने कुरा भएन ।
एकपछि अर्का सांसदले पेल्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले मौन स्वीकारोक्ति दिए । प्रतिवेदन तयार पारिने अवस्थामा पुन: बहस भएर परिवर्तन गरिएन भने राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष वा सदस्य बन्नका लागि रोक लाग्नेछैन वा गलत ठहरिनेछैन । बीमा प्राधिरकणमा रोक नलगाइनु भनेको अन्य नियामक निकायमा पनि यस्तो व्यक्तिलाई रोक नलगाइनु हो ।
किन राखिन्छ अयोग्य ?
संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायमा मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी पनि दलको सदस्यताबाट मुक्त हुनै पर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ स्वार्थ नबाझियोस्, पार्टीको बलमा संस्थाको सम्पतिको आर्थिक अनुसशासन उल्लङ्घन नपरोस् भन्ने हेतुका साथ यस्तो व्यवस्था राखिने गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारी तथा अर्थ मन्त्रालयका कानुन हेर्ने अधिकारीहरूले पनि यही धारणा राखेका छन् ।
‘राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्तिलाई पनि योग्यको सूचीमा राख्नुको अर्थ भोलिको दिनमा पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि दिनु हो । उनीहरूको दोहोरो भूमिका हुन सक्छ । कति त मन्त्रीभन्दा माथि होलान् नत्र पनि कर्चमारीभन्दा माथि हुन्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा भए पनि त्याग्नुपर्ने अवस्था हो तर यसको गाम्भीर्य बुझिएन ।’
उनीहरूले सदनमा गम्भीर्य बुझाउन नसकेको स्वीकार गरे, ‘हामीले केही भनौँ भने हेप्नी भनिहाल्नुहन्छ, हामी के बोल्नु ?’
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३, २०७६, ०८:५१:००